ओलीले खुलेआम प्रचण्डको अनुहार हेर्न मन छैन भनेपछि सर्वसाधारणको यस्तो प्रतिक्रिया « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
ओलीले खुलेआम प्रचण्डको अनुहार हेर्न मन छैन भनेपछि सर्वसाधारणको यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौँ । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिखेरको समयमा निकै भनाइहरु खानु परेको छ । हिजोमात्रै ससद भवनमा बैठक चलिरहदा एमालेका धेरै जसो नेताहरुले भवनमा बैठक अबरुद्ध मचाए ।त्यतिबेला नै बैठक स्थगित भयो । लगत्तै प्रचण्ड साहानु भुती लिएर बसेर छलफल गरौं भनेर केपी ओलि नजिकै जादै गर्दा ओलि कड्किए तपाईं सग बोल्न त के तपाईंको अनुहारसम्म हेर्न मन छैन ? भने तर के यति ठुलो दलको पार्टी अध्यक्ष ओलिले भन्ने शब्द यहि हो ?
कि बैठकमा सबैलाई हसाउन जानू भएको हो? तर हामीले देश बनाउने भनेर हाम्रा नेताहरुलाइ भोट हालेर त्यहासम्म पुर्याउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ? यदि होइन भने किन यो खिचातानी भइरहेको छ बैठकमा ? तर देश बनाउने भन्दा भत्काउने धेरै भेटियो यो देसमा ? कपडाको टालो हल्लाउँदैमा देश बन्दैन ? टायर बाल्दैमा देश बन्दैन ?यस्तो राजनीति गरेर देशले कहिले मुहार फेर्ला ? एकातिर प्रचण्डले ओलिको कुरा नसुन्ने अर्कोतिर ओलिले प्रचण्ड सग बोल्न त के मुखसम्म पनि नहेर्ने रे?
यी दिनहरु कहिले सम्म हामी नेपाली जनताले भोगिरहने ? कि सधै यसैगरी रास्ट्रको भत्ता खाने दरिद्रहरु हौ तिमिहरु? जहाँ जसको जुन पार्टी भएपनि मिलेर नेपाली जनतालाई हित हुने र नेपाल प्रती कुनै पनि नराम्रो आच आउने खालको संविधान सम्सोधन गर्नुपर्छ ।होईन भने नेपालमा तपाईंहरुले गरेको राजनीति सार्थक रहदैन ?
अन्तमा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सम्सद भवन स्थगित भएपछि बसेर तपाई हामी छलफल गरौ भन्दा ओलिले “”तपाईं सग कुरा गर्न त के तपाईंको अनुहार पनि हेर्न मन छैन ? “” यस्तो भन्नू के ओलिको नियत खराब भएकै हो त ? प्रतिक्रिया दिनुहोला ?
महेन्द्र चापागाईं माडी ,चितवन